Firenena 20 ambony indrindra manana trosa be indrindra eran-tany 2022 - Victor Mochere
Ny trosa dia asa iombonan'ny toekarena miasa rehetra. Ny trosam-panjakana, fantatra amin'ny anarana hoe trosam-pirenena na trosam-panjakana, dia ny trosan'ny governemanta foibe iray. Tafiditra ao anatin’izany ny vola atolotry ny fanjakana amin’ireo mpampindram-bola ao amin’ny firenena (trosa ao an-trano, na trosa anatiny) ary koa amin’ireo mpampindram-bola iraisam-pirenena (trosa vahiny, na ivelany). Na izany aza, satria ny governemanta dia misintona ny ankamaroan'ny fidiram-bolany amin'ny mponina ao aminy, ny trosam-panjakana dia trosa ankolaka amin'ny mpandoa hetra.
Na dia zava-dehibe aza ny haben'ny trosa, ny fahafahana mandoa vola dia mbola zava-dehibe kokoa. Tena zava-dehibe koa ny hoe iza no trosa. Ny trosa anatiny, rehefa tazonin'ny olom-pireneny ny trosan'ny firenena, dia manampy amin'ny fampihenana be ny loza mety hitranga. Firenena maro hafa no mitrosa amin'ny mpampindram-bola vahiny ary ireo mpampindram-bola vahiny ireo dia mety ho mpiara-miombona antoka na mpifanandrina amin'ny fampindramam-bola ho fampindramam-bola hanitarana ny tanjona ara-stratejika na ara-tafika, toe-javatra antsoina hoe "fandrika trosa".
Sabatra roa lela ny trosa. Matetika izy io no ampiasaina mba hiteraka fitomboana amin'ny ho avy, fa ny fitsipi-pifehezana ara-bola dia tena zava-dehibe: ny tsy fahampiana tsy mitsaha-mitombo dia midika fa na ho ela na ho haingana dia ho tonga ny teboka tsy mety - tsy heverina fa na dia voasoroka aza ny tsy fahampiana, dia lasa enta-mavesatra tsy takatry ny saina ny vidin'ny trosa amin'ny trosa. soroky ny taranaka ho avy. Ny fampindramam-bola ho fandaniam-bolam-panjakana dia mitaky fihetsika mandanjalanja tsara. Ny fanaovana izany dia mety hampiroborobo ny fitomboana na hitarika amin'ny tsy fifandanjana ara-bola izay manakana azy.
Ireto ny firenena 20 voalohany manana trosa betsaka indrindra manerantany.
$ 21.47 tapitrisa tapitrisa
$ 11.79 tapitrisa tapitrisa
$ 6.76 tapitrisa tapitrisa
$ 2.74 tapitrisa tapitrisa
$ 2.46 tapitrisa tapitrisa
$ 2.44 tapitrisa tapitrisa
$ 1.85 tapitrisa tapitrisa
$ 1.64 tapitrisa tapitrisa
$ 1.54 tapitrisa tapitrisa
$ 1.39 tapitrisa tapitrisa
$ 655 lavitrisa
$ 652 lavitrisa
$ 588 lavitrisa
$ 543 lavitrisa
$ 479 lavitrisa
$ 447 lavitrisa
$ 414 lavitrisa
$ 404 lavitrisa
$ 337 lavitrisa
Top 5 famantaranandro fanatanjahan-tena tsara indrindra 2022
Fironana ara-barotra nomerika 10 ambony 2022